Cockpit: Codsi leh is -dhexgal shabakad oo loogu talagalay maamulka server | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | | Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhowr maalmood ka hor, waxaan sahaminnay mid weyn oo caan ah qalab software Goobta IT ee shabakadaha iyo server -yada wac Nagios Core. Iyo waxyaabaha beddelka u ah, waxaan xusnaa "Baqtiinta".
Haddaba maanta waxaan sahamin doonaa aaladdan kale ee weyn ee software -ka oo la yiraahdo "Baqtiinta", tan iyo, waxay aad u faa'iido u yeelan kartaa labadaba Maamulayaasha Nidaamka / Maamulaha (SysAdmins), sida kuwa kale Xirfadlaha IT o Xisaabiye Computer iyo Linux.
Iyo kuwa idinka mid ah oo aan sahamin qoraalkeenii hore Nagios Core iyo aalado kale oo la mid ah oo ku yaal berrinka Shabakadaha iyo Servers ama adeegsi gaar ah oo loogu talagalay Maamulayaasha Nidaamka / Maamulaha (SysAdmins), waxaan isla markiiba hoos uga tagi doonaa qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha qaar ka mid ah daabacaadyadii hore ee la xiriira goobtan IT:
"Nagios® Core ™ waa shabakad il furan iyo codsi la socodka nidaamka. Waxay la socotaa martigaliyayaasha (kombiyuutarada) iyo adeegyada aad sheegto, iyagoo ku ogeysiinaya markay wax qaldamaan iyo markay hagaagaan. Nagios Core waxaa markii hore loogu talagalay inay ka hoos shaqeyso Linux, in kasta oo ay tahay inay sidoo kale ka hoos shaqeyso inta badan Nidaamyada Howlgalka ee ku saleysan Unix sidoo kale. Sidoo kale, waa nooca bilaashka ah ee aaladdayada hadda la yiraahdo Nagios XI." Nagios Core: Waa maxay Nagios iyo sida loogu rakibo Debian GNU / Linux?
Webmin: maamulka ka socda biraawsarka webka
1 Kootpit: Lambarka nooca cusub ee xasilloon 250
1.1 Waa maxay Cockpit?
1.3 Sida loogu rakibo Debian GNU / Linux 10?
1.3.1 Soo dejiso, rakib oo isticmaal
1.3.2 Sawirada shaashada
2 10 kale oo lacag la'aan ah oo furan
Kootpit: Lambarka nooca cusub ee xasilloon 250
Waa maxay Cockpit?
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee Mashruuca Cockpit, "Baqtiinta" waa aalad softiweer oo lagu tilmaamay sida soo socota:
"IYOWaa isku-xirka garaafyada ku saleysan shabakadaha ee loogu talagalay server-yada, loogu talagalay qof walba, gaar ahaan kuwa aan khibrad u lahayn Linux, oo ay ku jiraan maamulayaasha Nidaamyada Hawlgalka Windows. Sidoo kale, kuwa yaqaana Linux oo raba hab fudud oo garaaf leh si ay u maareeyaan server -yada iyo kombiyuutarada kale ee shabakadda. Ugu dambayntiina, waxay sidoo kale ku habboon tahay maamulayaasha IT -da ee waayo -aragnimada leh kuwaas oo inta badan adeegsada aalado kale, laakiin doonaya inay yeeshaan dulmar guud ee nidaamyada shaqsiyeed."
Soo -saareyaasheeda ayaa faahfaahinaya taas "Baqtiinta":
Way fududahay in la isticmaalo: Sababtoo ah waxay yareyneysaa adeegsiga amarrada terminaalka, waxay fududeyneysaa fulinta howlaha iyada oo loo marayo interface -ka shabakadda iyadoo la adeegsanayo jiir, waxayna leedahay terminal isku -dhafan, kaasoo faa iido leh marka adeegsigiisa loo baahdo ama loo baahdo.
Waxay leedahay dhexgal wanaagsan nidaamka qalliinka ee la isticmaalo: Tan iyo, waxay adeegsanaysaa API -yadii hore ugu jiray nidaamka. Dib uma cusboonaysiiso nidaamyada hoose ama kuma darto lakab ka mid ah qalabkeeda. Sida caadiga ah, Cockpit wuxuu adeegsadaa galitaanka iyo mudnaanta isticmaalayaasha nidaamka caadiga ah. Galitaanka shabakadaha oo dhan ayaa sidoo kale taageera hal-galitaan iyo farsamooyin kale oo xaqiijin. Sidoo kale, ma isticmaasho kheyraadka ama ku shaqeyso asalka marka aan la adeegsan. Sababtoo ah waxay ku socotaa dalab, iyada oo ay ugu wacan tahay firfircoonaanta godka nidaamka.
Waa la fidin karaa: Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah inay taageerto liis ballaadhan oo ah dalabyada ikhtiyaariga ah (ku-darka / plugins) iyo dhinacyada saddexaad ee kordhiya shaqadiisa iyo baaxaddiisa. Markaa, waxay kuu oggolaaneysaa inaad qorto cutubyo kuu gaar ah si aad Cockpit u samayso waxa loo baahan yahay.
Sidoo kale leh "Baqtiinta" hawlo badan ayaa la qaban karaa, kuwaas oo 10 -ka soo socda lagu sheegi karo:
Kormeer oo beddel goobaha shabakadda.
Qalabaynta dab -damiska.
Maamul kaydinta (oo ay ku jiraan qaybaha RAID iyo LUKS).
Abuur oo maamul mashiinnada dalwaddii.
Soo dejiso oo socodsii weelasha.
Dulmar oo raadi diiwaanka nidaamka.
Kormeer qalabka qalabka.
La soco waxqabadka.
Maamul kootooyinka isticmaalaha.
Sida loogu rakibo Debian GNU / Linux 10?
Kahor intaanan bilaabin qaybtan, waxaa xusid mudan sida caadiga ah in kiiskan wax ku oolka ah aan u adeegsan doonno kan caadiga ah Dib u soo celi Linux loo yaqaan Mucjisooyinka GNU / Linux, taas oo ku saleysan MX Linux 19 (Debian 10). Kaas oo la dhisay ka dib «Hagaha Snapshot MX Linux».
Si kastaba ha ahaatee, wax kasta GNU / Linux Distro maxaa taageero ah Systemd. Sidaa darteed, waxaan u adeegsan doonnaa tan MX Linux respin laga bilaabo Nidaamka kabaha GRUB ikhtiyaarkaaga leh "Ka bilow Systemd". Halkii ikhtiyaarkeedii caadiga ahaa, oo aan lahayn Systemd ama halkii leh Nidaamka-shim. Sidoo kale, waxaan fulin doonnaa dhammaan amarrada amarka ee ka yimid Isticmaalaha Sysadmin, halkii Isticmaalka xididka, ka yimid Respin Linux.
Oo hadda adiga soo dejiso, rakibid iyo isticmaal, waxaan u adeegsan doonnaa tilmaamaha si Debian GNU / Linux oo ka mid ah «Hagaha rakibaadda».
para Debian 10 Distros (Buster) ama ku salaysan iyaga, doorashada ugu fiican ee soo dejiso, rakibid iyo isticmaal de "Baqtiinta" , waa in la habeeyo faylka Repositories Debian Backport, halkaas laga bilaabo si wax walba si raaxo leh loogu fuliyo nooca ugu casrisan ee suurtogalka ah. Oo tan, tan soo socota waa in la fuliyaa amar amar ee terminal (Console) ee Operating System -kaaga:
Markaa waxaan leenahay oo kaliya fur biraawsarka oo ku qor barta cinwaanka waddada maxalliga ah ama ta fog ee qalabka aan rabno inaan maareyno. Haddii ay tahay kombiyuutar fog, waa inuu sidoo kale rakibay "Baqtiinta", sida hoos ka muuqata:
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "Baqtiinta" waxaad sahamin kartaa xiriiriyeyaasha soo socda:
Dukumiintiyada rasmiga ah
Codsiyada (Plugins / Plugins)
10 kale oo lacag la'aan ah oo furan
Kormeeraha Server -ka PHP
Si aad wax badan uga ogaato kuwan beddelaad iyo in ka badan, guji xiriirinta soo socota: Qalabka iyo Software -ka Korjoogteynta Shabakada oo ku hoos jira Isha Furan.
Soo koobid, sida la arkay "Baqtiinta" waa sida Nagios Core aalad software weyn berrinkii Shabakado / Adeeg iyo Maamulayaasha Nidaamka / Maamulaha (SysAdmins). Laakiin ka baxsan noqoshada beddel ama beddel Nagios Core Waxay u tahay dhammaystir dhammaystiran, si loo sameeyo a xirmada arjiga ee kormeerka iyo maareynta qalabka (marti -geliye) shabakad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Cockpit: Codsi leh is -dhexgal shabakad oo loogu talagalay maamulka server
Beddel kale waa webmin ..
Salaan, Luix. Waad ku mahadsan tahay faalladaada iyo waxtarkaaga.
Taliyaha saqda dhexe 4.8.27 wuxuu la yimaadaa horumarino kala duwan iyo taageerida xumaanta iyo cagta